Iyadoo wajahaysa baahida sare ee mustaqbalka MacBook Pros, Apple wuxuu ku biirayaa Luxshare Precision Industry | Waxaan ka socdaa mac
Iyadoo wajahaysa baahida sare ee mustaqbalka MacBook Pros, Apple waxay saxiixday Luxshare Precision Industry
Horraantii bishii Luulyo, war ayaa soo baxay in Apple Waxaan raadinayay alaab-qeybiyeyaal kale oo loogu talagalay soo-bandhigyada mini-LED. Apple waxay dhibaato ka haysataa bixinta shaashadda noocan ah ee hadda ah 12,9-inch iPad Pro, laakiin gaar ahaan shaashadaha soo socda ee MacBook Pro .Tani waxay ku horseeday shirkadda inay raadsato alaab-qeybiyeyaal dheeri ah iyo wuxuu helay Luxshare Precision Industry.
Apple waxay rajeyneysaa dalab weyn oo loogu talagalay kuwa soo socda ee loo yaqaan 'MacBook Pros', sidaa darteedna, marka la eego yaraanta kheyraadka si ay u awoodaan inay soo saaraan shaashadaha Mini-LED ee aaladooda oo dhan, waxay qortay shirkad dheeraad ah oo ka mid ah shaashadaha noocan ah. Apple waxay isu diyaarineysaa dalab weyn oo loogu talagalay dib-u-habeynta soo socota ee 14-inch iyo 16-inch MacBook Pros. Sababtaas awgeed, sida ay sheegayaan warar xan ah, waxaa la sheegay inay kiraysatay alaab-qeybiyaha labaad ee shaashadda yar-yar ee loo yaqaan 'LED-yada yar yar' ee lagu rakibi doono goobahan, Sida laga soo xigtay DigiTimes.
Apple ayaa ku daray Warshadaha Saxda ah ee Luxshare sida bixiyaha labaad ee ugu weyn ee teknoolojiyada dusha sare (SMT) ee loogu talagalay bandhigyada mini-LED. Waqtigan xaadirka ah waxaa kaliya taageeraya SMT, ama Taiwan Surface Mounting Technology, iyada oo ah alaab-qeybiyeheeda howlaha SMT ee 12.9-inch iPad Pro mini-LED iyo MacBook-ga soo socda.
Waxyaabaha soo socda ee 'MacBook Pros' waxay u badan tahay inay ku jiraan baahi sare iyadoo ay ugu wacan tahay astaamo iyo isbeddelo badan oo muddo dheer la sugayay. Dabcan, waxaan lahaan doonnaa jiil cusub Apple Silicon oo ay weheliso qashin cusub oo xitaa ka awood iyo wax badan. Laakiin sidoo kale waxaa la filayaa inay la yimaadaan dib u qaabeyn weyn oo muhiim ah: geesaha fidsan, baabi'inta barta taabashada iyo dekedo dheeri ah. Tani waxay abuuri doontaa baahi xoog leh Applena ma rabto wax la mid ah inay ku dhacaan sida iPad Pro. Baahida xoogan iyo alaab yarida soo wajahda la'aanta qaybaha.
Apple waxay isu diyaarineysaa mustaqbalka dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Iyadoo wajahaysa baahida sare ee mustaqbalka MacBook Pros, Apple waxay saxiixday Luxshare Precision Industry
LAGOS waxay soo bandhigaysaa jijin raaxo ah oo loogu talagalay Apple Watch oo qiimaheedu yahay 6.500 Euros
Apple waxay soo saari kartaa baytariyadeeda Apple Car iyo kuwo kale